ဝန်ဘဏ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ - MECCA ပါဝါ
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / ဝန်ဘဏ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-04 မူလ:ဆိုက်ကို
ဘဏ်များကိုတင်ပါရေကြောင်း, စွမ်းအင်, လျှပ်စစ်ဓာတ်အား, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဘဏ္ finance ာရေး, ကမ်းလွန်လ်ပလက်ဖောင်းများ, ဆက်သွယ်ရေး, သို့သော်ဝန်ဘဏ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိသနည်း။ ဤတွင်မိတ်ဆက်များအချို့သည်ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဝန်ဘဏ်သည်လျှပ်စစ်ဝန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး0န်ထုပ်0တ်စုံကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုသို့0င်ရောက်ပြီးအရင်းအမြစ်များ၏ရလဒ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။0န်ဆောင်မှုဘဏ်သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ် \_"စစ်မှန်သော \_" ဝန်ကိုတိကျစွာတုပရန်ရည်ရွယ်သည်။
သို့သော်ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသောနှင့်တန်ဖိုးကျပန်းကျပန်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့်0ယ်ခြင်းနှင့်မတူဘဲ load bank သည်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော, အကျိုးဆက်အားဖြင့်0န်ဆောင်မှုဘဏ်သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပါ0င်သော elements နှစ်ခုလုံးပါ0င်သည့်ကိုယ်ပိုင်ပါ0င်သောတပ်မက်မှုစနစ်,
Power Source မှ0န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာတွင်0န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာကို အသုံးပြု. စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြု. စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြု. စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြု. စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုစမ်းသပ်ရန်,
ဝန်ဘဏ်များကိုအင်ဂျင်စက်စက်များ, ဘက်ထရီစနစ်များ, အရန်စက်ပစ္စည်းများ,
0 င်ရောက်ခြင်းအပါအ0င်0န်ဆောင်မှုပေးဘဏ်များကို0ယ်ယူနိုင်သည်။
① Generator Test Unit
စက်ရုံရှိစမ်းသပ်မှုယူနစ်တွင်မီးစက်တပ်ဆင်ပြီးနောက်စမ်းသပ်အင်ဂျင်နီယာသည်0န်ဆောင်မှုအုပ်စုအား discrete နှင့် selectrical loads ကို cenerctor ကို သုံး. တုန့်ပြန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းစမ်းသပ်အင်ဂျင်နီယာများသည်ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သည်းခံမှုများကိုပြည့်မီစေရန်အတွက်မီးစက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုချိန်ညှိပြီးချိန်ညှိနိုင်သည်။
အသေးစားဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်ငယ်များထုတ်လုပ်သူများကိုလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအောက်ရှိအသစ်ထုတ်လုပ်ထားသောအင်ဂျင်များကိုစမ်းသပ်ရန်ဝန်များကိုလည်းအသုံးပြုကြသည်။ ဒိုင်မီိုမ်မီတာဟုခေါ်သောကိရိယာမှတဆင့်အင်ဂျင်ကို load box သို့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ အလားတူပင်, ထုတ်ကုန်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်သေချာစေရန်လိုအပ်ပါကအင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးချိန်ညှိသည်။
site ပေါ်တွင် install လုပ်ထားသောမီးစက်ကိုစမ်းသပ်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပါဝါပျက်ကွက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုသေချာစေရန်ပုံမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးပုံမှန်လည်ပတ်ရမည်။0န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကဝန်အုပ်စုကို Generator မှကာကွယ်ထားသောစက်ရုံ၏ဝန်ကို0တ်ဖွဲ့ရန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်မီးစက်နှင့်အတူမည်သည့်ပြ problems နာကိုမဆိုဝေငှသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးတည့်မတ်ပေးနိုင်သည်။
Proment Proment Backup Power Systems အတွက်အမျိုးသားမီးသတ်ကာကွယ်ရေးအသင်း (NFPA) လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် Simplex Load အဖွဲ့များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များသည်အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်အရန်ကူးခြင်းစနစ်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ပုံမှန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလက်ခံခြင်းပါဝင်သည်။ လိုအပ်ချက်၏အနှစ်သာရမှာအရေးပေါ်နှင့် backup power systems များကိုဝန်အောက်တွင်စမ်းသပ်သင့်သည်။
3. \_"စိုစွတ်သောစုဆောင်းခြင်း \_" ဖယ်ရှားပါ \_"
လောင်ကျွမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအင်ဂျင်သည်လောင်စာဆီလောင်စာဆီစားသုံးရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သောနောက်ထပ်ဝန်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အတွက်လိုအပ်သောအပိုဝန်များကိုလျှောက်ထားရန် The Load Generation တွင်0င်ရောက်နိုင်သည်။ အကယ်. ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်လုံလောက်သောဝန်အောက်တွင်မပြေးပါကအများအားဖြင့်လောင်စာဆီသည်အင်ဂျင်၏အိပ်ဇောပိုက်တွင်စုဆောင်းပြီးအဆီပြန်သောဖုံးအုပ်ထားလိမ့်မည်။
စစ်ဆေးရေးအတွက်ဝန်ဘဏ်တင်သွင်းသည့်အခါအပူချိန်ကို 15-25 ℃အကြားထိန်းချုပ်သင့်သည်။ လက်ရှိ Transformer ကိုပြုလုပ်သောအခါဒုတိယဖွင့်လှစ်ထားသည့် circuit ကိုတားဆီးရန် Product Bank Gear ကိုမပြောင်းပါနှင့်။ ဝန်ဘဏ်ကိုသိုလှောင်သောအခါအစိုဓာတ်နှင့်ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုကိုဂရုပြုပါ။ ဝန်ဘဏ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်သီးသန့်ပါဝါကြိုးများကိုသာသုံးပါ။ စမ်းသပ်ခဲသည်တိုက်ရိုက် terminal နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ ကျေးဇူးပြု. ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာနှင့်တင်းကြပ်စွာဆက်သွယ်ပါ။ မီး (သို့) လျှပ်စစ်ထိတ်လန့်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုတားဆီးရန်မှာဝန်ဘဏ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အမှတ်အသားများအားလုံးကိုဂရုပြုပါ။ ဆက်သွယ်မှုမပြုလုပ်မီနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ပါ။ အချို့သောညွှန်ကြားချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောဖျူးများကိုသာသုံးပါ။ ထိတွေ့ circuits နှင့် charged သတ္တုများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှောင်ပါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သည့်အခါလျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ထိတွေ့သည့်အဆက်အသွယ်များနှင့်0န်ထမ်းဘဏ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမထိပါနှင့်။
MECCA Power ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်စက်ရုံမှမထွက်ခွာမီစမ်းသပ်မှုများစွာကိုခံယူကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လယ်ကွင်းအကြိမ်ရေအရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုအာမခံထားသည်။ အကယ်. သင်သည်ဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်တွင်ပါ0င်နေပါက0က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် https://www.meccaplower.com.cn ဖြစ်သည်။
ဘဏ်များတင်ပါ ဒေတာစင်တာတင်ဘဏ် inductive load ဘဏ် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဘဏ် load 100kw Dummy ဝန်ဘဏ် Trailer Mounted Load Bank စဉ်ဆက်မပြတ် running ဝန်ဘဏ် ခံနိုင်ရည်ကိုဘဏ်